‭ Magrudy.com - uBuchule bobomi obusezandleni: Gr 1: Teacher's guide ‬
uBuchule bobomi obusezandleni: Gr 1: Teacher's guide
Izakhono zobomi zakwa Hands-on zisisixhobo sokufundisa esiphangeleleyo kumabanga abasaqalayo. Oluqeqesho lunxamnye ne Kharityhyulam yesizwe ehlaziyiweyo, lugxininisa ekumiliseleni kubafundi umfuziselo ophiliyo, nokuphucula indlela yokucinga ngokuqiqayo nangokwakhayo. Ikhuthaza intlonipho kwizimo zeyantlikwano kwinkolo nakwinkcubeko yelo Mzantsi Afrika. Incwadi efundwa ngabantwana isebenzisa imeko zobomi ezokwenyani ukwenzela ukuba lemisebenzi yabo yaseklasini ibenako ukubanceda bafikelele kwiziphomo. Isikhokhelo sika Titshala sicacisa iziphumo kunye namanqanaba okuhlola emsebenzi ngamnye kunye nesikhokhelo kwindlela yokuhlola imisebenzi. Incwadi yokusebenza iqulathe imisebenzi enomtsalane, kwaye egxininisayo neyandisa izixhobo exikwi ncwadi yabafundi.